Tu Tu Tha: ယောင်ဝါးဝါးအရိပ်
Sunday, April 19, 2009 | Labels: ဝတ္ထုတို |
This entry was posted on Sunday, April 19, 2009 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ကြိုက်တယ်ဗျ။ မရှိတမျိုး ရှိတစ်မျိုးလေ
မတူးတူးရေ ကျီးပင်လမ်းက ကိုပီတာလားဗျ
ကျွန်တော်တို့ ၁၀ တန်းရောက်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော